Ebube nke HTC Ocean: Egosiputa nkọwapụta | Gam akporosis
El afọ HTC na-ebi nwere ike kọwara dị ka jupụtara jupụtara na ala. Companylọ ọrụ ahụ enweela ọtụtụ nsogbu n'ihi mfu nke ngalaba nke telephony na-eweta. Mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, mgbe Nweta Google Site na nkewa a, ihe dị ka ihe na-aga nke ọma. Companylọ ọrụ ahụ gara n'ihu na-arụ ọrụ n'ụdị ọhụrụ dịka Ọdịmma HTC Ocean.
Onye ọkachamara kpọrọ aha a ọnwa ole na ole gara aga. O kwuru na ụlọ ọrụ ahụ ga-ewepụta ekwentị nwere aha a n'oge adịghị anya. Amụma ya emezuola, n'ihi na anyị enweela ike ịmata nke ahụ Nkọwa nke HTC Ocean Harmony. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ a?
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ isi mmalite chere na ngwaọrụ a ga-abụ otu n'ime ihe ọhụrụ U11 Ndụ ma ọ bụ U11 Plus. Ọ bụ ezie na n'ikpeazụ ọ dịghị otú ahụ. Anyị na-eche ihu a ohuru ngwaọrụ ma na oke osimiri. Nso nke abụọ ọzọ ụdị na-atụ anya na-abata, na Ocean Master na Ndụ Ndụ. Ma ọ nweghị ihe a maara.
Ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na nke a Ọdịmma HTC Ocean, anyị na-eche ihu a 5,99 inch LCD ihuenyo. Ọ ga-enwe a 2.160 x 1.080 pixel mkpebi na nha ihuenyo 18: 9. Yabụ ụlọ ọrụ Taiwanese sonyekwara usoro a na ngwaọrụ a.
N'ime, a Snapdragon 652 processor, 4 GB nke Ram na ngụkọta nke 64 GB nke nchekwa. Amabeghị ma ọ bụrụ na nsụgharị ndị ọzọ nke ekwentị ga-ahapụ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịgbasa nchekwa ahụ site na kaadị microSD. Anyị ga-echere ka HTC kwuo ihe banyere ya.
Banyere batrị ahụ, ọ dị ka ngwaọrụ ahụ ọ ga-anapụta karịa ezu. Na HTC Ocean Harmony ga-enwe batrị 3.930 mAh. Ọ na-enye nnwere onwe dị mma, zuru oke maka ụbọchị ahụ dum. N'oge ugbu a ọ bụ ihe niile amaara, yabụ anyị ga-achọ ịmatakwu nkọwa banyere ese foto site na ekwentị
Ngwaọrụ a ga-abanye ahịa na 2018. Ikekwe na mmalite nke afọ, ọ bụ ezie na ekpughebeghị ụbọchị ọ bụla. Anyị amaghịkwa ọnụ ahịa ya, ọ bụ ezie na nke a na-abụkarị otu n’ime nsogbu kachasị nsogbu maka HTC. Kedu ihe ị chere maka ngwaọrụ ọhụrụ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Leaked nkọwapụta nke HTC Ocean Harmony
A ga-enye Honor V10 na December 5